हेर्नुहोस् यस्तो छ गणतन्त्रको उपलब्धी, यो हो प्रचण्डले छोरीका लागि काठमाडौमा बनाएको महल ! – Sandesh Press
May 30, 2021 560
सुरुदेखि नै माओवादी पार्टीलाई सर्वहाराको आवाज भन्ने गरिएको छ । त्यसै पार्टीको प्रमुख भएपनि राजर्शी जीवनशैलीमा देखिने पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्पति विवरण भने सर्वहाराकै जस्तो देखिएपछि सम्पत्ति विवरणमाथि धेरैले आशंका व्यक्त नगरेका होईनन् ।प्रचण्डले त्यो बेला सार्वजनिक गरेको सम्पति विवरणमा चितवनमा एक कट्ठा जमिन र तीन तोला सुनमात्र रहेको भनेका थिए ।
प्रचण्डले हातमा लगाउने घडी नै एक लाख बराबरको भएको बताइन्छ । उनी सुत्ने पलंङ मात्रपनि लाखौँको छ भनिन्छ ।उनको खानपान, रहनसहन देखि लिएर उनले आफ्ना सन्तानहरुका लागि गरेको तामझाम हेर्दा पनि उनको सम्पति त्यतीँ नै भनेर सहजै विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । पटक–पटक पत्नी सीताको उपचार अमेरिकादेखि लिएर अन्य धेरै देशहरुका प्रचण्डले नगराएका पनि होईनन् ।उनको परिवारमा सबै राजनीतिमा छन्, व्यापार व्यवसायमा कोहि छैनन् । तर उनीहरु सबैको जीवनशैली राजा महाराजको भन्दा कम्ता छैन । हालै सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा जीवन श्रेष्ठले एक भव्य महलको तस्विर राख्दै लेखेको क्याप्सनले सबैको ध्यान खिच्यो ।
उनी लेख्छन्, ‘प्रचण्डले भैसेपाटिमा छोरीहरूलाई बनाएको करोडौंको घर । गणतन्त्र’ संयोग नै भन्नुपर्छ प्रचण्डसँग जोडिएको यो घरको तस्विर १४ औं गणतन्त्र दिवसका दिन आज सार्वजनिक गरियो ।यो तस्विरको सत्यताबारे अहिले शंका गर्ने ठाउँ नभएको पनि होईन । तर प्रचण्डको परिवारबाट नै यस विषयमा कुनै प्रतिकृया नआएका कारण यसलाई साँचो मानिएको छ ।
उक्त ट्वीटमा दर्जनौंको संख्यामा प्रतिकृयाहरु आएका छन् । धेरैले भनेका छन् गणतन्त्रको उपलब्धी नै यही त हो । यो महललाई तपाईहरुपनि निहाल्नुहोस् आफूलाई लागेको प्रतिक्रिया जनाउनुहोस् ।
Prevमलेसियामा एक नेपाली कामदारको हृदयाघातका कारण मृ’त्यु !
Nextमोटरसाइकल, स्कुटर र यी कारको मुल्य ह्वातै घट्ने